IGAD oo rajo tirtay riyo maalmeedkii Faroole iyo Ahmed Madoobe.
Topnews :-IGAD oo rajo tirtay riyo maalmeedkii Faroole iyo Ahmed Madoobe.
25 May 2013 Waagacusub.com-Taageerayaasha Ahmed Madoobe iyo Abdirahman Faroole ayey niyad xumo wajahday kadib markii urur goboleedka IGAD go-aamiyeen in Dowladda Federalka abaabusho shirweyne maamul goboleed KMG loogu dhidbo Jubaland. Go''aanka IGAD ka soo baxay ma aheyn mid sahal ku dhashay hasse yeeshee wuxuu ka marqaati kacay in xaalada Somalia ka gudubtay xilligii ay biyo ka hoos ka maamuli jireen Dowladaha Ethiopia iyo Kenya.
Dowladaha Ingiriiska iyo Turkiga ayaa ka shaqeeyay shirka IGAD ,waxaana lagula taliyay inay arrimaha Maamul goboleedya Somalia faraha kala baxaan,una daayaan Dowladda Federalka Somalia.
Xulufadda Ahmed Madoobe iyo Faroole ayaa jid walba la istaagay inay taageero xoogan ka heystaan Ethiopia iyo Kenya laakiin ugu dambeyn waxay xaqiiqsadeen in laga gudbay xilliyadii lagu faani jiray Ethiopia ama Kenya ayaa i wadata.
Warqad Wasaarada Arrimaha dibadda Somalia u qortay Dowladda Ethiopia ayaa lagu weydiiyay inay faahfaahin dheeriya ka bixiyaan sababta Madaxweynaha Killilka Somalida Mr Abdi Ileey u yiri "Dhiigeena ayaan u daadineynaa Jubaland"
Wasaarad Khaarijiga Ethiopia ayaa dhambaalkaas uga soo jawaabtay in deg deg loo Maxkamadeyn doono Madaxweynaha Kililka shanaad si loo weydiiyo sababta uu Dhiiga askarta Ethiopia inuu daadin doono ugu hanjabay.
Wasaaradda Arrimaha gudaha Ethiopia war ka soo baxay ayaa Madaxweynaha Kililka 5-aad lagu amray inuu kaba hadli karin arrimaha Somalia.
Wasaaradu waxay sheegtay in arrimaha Somalia looga dambeeya Wasaaradda Arrimaha dibadda Ethiopia oo qura.
Ethiopia lafteeda waxaa saaaran Cadaadis Caalamiya maxaa yeelay Maamul goboleedyadeeda waxaa soo magacaabay Wasaarada Daakhiliga.
Si kastaba ha ahaatee,Go''aanka urur goboleedka IGAD waa guuldarada Tacbane shisheeye,waana guusha Toosanaha Soomaaliyeed.